Shirkii Copenhagen oo war-murtiyeed laga soo saaray
November 20, 201 4 (GO)- War-murtiyeed 24 qodob ka kooban ayaa laga soo saaray shirkii muddada labada maalmood ah soconayey ee maanta lagu soo gaba gabeeyey magaalada Copenhagen, shirkaasoo lagu gorfeynayey waxa ka qabsoomay barnaamijka New Deal ee sanadkii hore caalamku dhaqaalaha badan Soomaaliya ugu balan qaaday. War-murtiyeedka oo GO heshay nuqul kamid ah wuxuu u qornaa sidan:
Madasha Iskaashiga ee Heerka Sare
5. Waxaynu ku nuuxnuuxsanaynaa in dadka Soomaaliyeed ay u baahay yihiin inay arkaan natiijooyin la taaban karo ee ka soo baxa qorsha Hiigsiga Cusub ee Soomaaliya ee heerka degmo. Si arrintan loo taageero waxaa naga go’an inaan horumarino waxqabadka guddihoosaadyada Yoolalka Nabadda iyo Dowlad-Dhisidda ee Hiigsiga, sidoo kalena aan u qoondeyno lacag u qaar ah mid kasta ee Yoolalka Nabadda iyo Dowlad-Dhisidda ee Hiigsiga. Arrintan waxay sii xoojinaysaa xiriirka ka dhexeeya Dpwladda Dhexe iyo maamullad degaanada, si ay qayb uga qaadato horumar dheeraad ah. Waxaan garwaaqsanay in horumar laga gaaray Hanaanka Maalgelinta Hiigsiga Cusub oo ay ka midtahay sameynta Sanaadiiq Maaliyadeed oo wada maamulayaan qaramada Midoobay iyo Bangiga Adduunka, taasoo keentay in gargaarka soo xarooda oo kordhay. Waxaynu ka dhursugaynaa in la si dhaqsi ah loo sameeyo sanaadiqda maaliyadeed ee harsan oo ay maamuli doonaan Bangiga Horumarinta Afrika (AfDB) iyo Sanduuqa Lacagta Adduunka.
7. Waxaan garwaaqsanaya horumarka laga gaaray geeddi-socodka dhisidda maamulgoboleedyada. Qaabdhismeedka dowlad-goboleedyada oo la shammeystiro sannadka 2015 wuxuu muhim u yahay dadaalka wadajirka ah ee an ugu jirno si ay nabad iyo xasilloni ugu soo noqdaan Soomaaliya. Waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada ay arrintu khuseyso inay u hawlgalaan dadaallada aan soo sheegnay iyo arrimaha kale ee dibuheshiisiinta ah ee taageeraya sidii lagu hirgelin lahaa Aragtida 2016. Maamullada hadda jira, sida Puntland, Maamulka Ku-Meelgaarka ah ee Jubba, Galmudug iyo maamullada kale ee sameysmaya ayaa si dhow loo la shaqeyn doonaa si loo hirgeliyo Aragtida 2016. Waxaan soo dhoweynaynaa horumarka laga gaaray maamul ku-meelgar u sameynta Koonfur Galbeed iyo Gobollada Dhexe ee Soomaaliya. Waxaan bogaadinaynaa dadaalka uu Urur-Goboleedka IGAD ku taageerayo maamul sameynta.
12. Waxaan soo dhoweynaynaa horumarka laga gaaray yareynta falalka burcadbadeednimada, inkastoo ay khatartu weli taagantahay. Waxaan Dowladda Federaalka ugu baaqaynaa inay soo saarto istaraatijiyada ku aaddan amniga badaha.
19. Waxaa aad noo cabsi geliyay xaaladda khatarta ah ee arrimaha baniaadanimo ee jirta Soomaaliya iyo intii yareyd ee la gaarey ka did macluushii sannadkii 2011 oo sii dhammaaneysa. Waxaan ognahay in abaar joogta ah iyo daadad xilliyada qaarkood dhaca iyo dagaal joogta ah iyo barakacaba ay sabab u yihiin cunto yaraan weyn ee dalka ka jirta, sidoo kalena ay kor u qaadayaan heerka nafaqa darrada dalka ka jirta. Waxaan garowsanahay baaxida degdegga ah ee loo qabo in gargaarka baniaadanimo uu si nabad ah ku gaaro dhammaan dalka qaybihiisa iyadoo aan la horistaagin, gaar ahaan degaanada dhowaan la xoreeyay. Sidoo kalena si buuxda loo dhowro sharciga caalamiga ah ee xilliyada dagaalka iyo mabaadi’da uu ku qotomo. Waxaan ognahay muhimadda ay leedahay dhisidda adkeysiga dadka Soomaaliyeed, iyadoo si fiican la isugu xirayobarnaamijyada baniaadanimo iyo kuwa horumarineedba, iyadoo si gaar ah diiradda loogu saarayo xalka waara.